काभ्रेमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो: खुशी हुने की, अझ बढी सावधानी अपनाउने ? – मिलिजुली खबर
काभ्रेमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दो: खुशी हुने की, अझ बढी सावधानी अपनाउने ?
काभ्रेमा कोरोना भाईरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या निकै कम हुँदै गएको छ । यो एक हिसाबले राम्रो पनि हो । तर परीक्षणको दायरा बढाएर कोरोना भाईरसको संक्रमण कम भने भएको होइन ।
अहिले निकै कमको मात्रै कोरोना परीक्षण हुने गरेको छ । कोरोना भाईरससंग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकाले थप सजग हुन परीक्षण गराउनु बाहेक अन्य समुदाय तहमा पुगेर पछिल्लो समयमा स्वाब संकलन गरिएको छैन् ।
भदौ २७ गतेदेखि जिल्लाभर लगभग प्राय जसो विद्यालय खुलेका छन् । भिडभाड हुने कार्यक्रम चलिनै रहेका छन् । होटल, बजार खुलेका छन् । पर्याप्त सावधानी देखिएको छैन् । यातायातको साधनमा कुनै सावधानी अपनाईएको छैन् । चाडपर्व सुरू हुँदैछ ।
दुईवटा राजमार्ग र ठूल ठूला अस्पताल काभ्रे कोरोना संक्रमितको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत देखिएको छ । हाल जिल्लामा १५६ जना सक्रिय संक्रमित छन् । जसमा १८ जना अस्पतालको आईसोलेसनमा छन् । १३८ जना होम आईसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले बताउनुभयो ।
जिल्लामा कोरोना भाईरसको सक्रिय संक्रमितको कम छ । तर बढी सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । जिल्लामा कोरोना भाईरस विरूद्धको खोप पनि धेरै जनाले लगाएका छन् । समुदाय स्तरमा परीक्षण बढाउन सबै स्थानीयले गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिन र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न नबिर्सन आग्रह गरेका छन् ।
पनौती नगरपालिकामा मानव अधिकार मजबुद गराउन कार्ययोजना बनाइने
वाईसिएलको धुलिखेल नगर कमिटी अध्यक्षमा पूर्णमान तामाङ